Ikliphu 'yoMqobo' ityhila ukuba kule Ndlela izalise uloyiko "Akukho ndawo ikhuselekileyo" - iHorror
Ikhaya	imidlalo yokuzonwabisa	Iphetshana Elithi 'Threshold' Lityhila Ukuba Kolu Hambo Luzaliswe ZiNkcaso “Akukho ndawo ikhuselekileyo”
Iphetshana Elithi 'Threshold' Lityhila Ukuba Kolu Hambo Luzaliswe ZiNkcaso “Akukho ndawo ikhuselekileyo”
Amasiko, iinkolo nobugqwirha ngale ndlela iza
by UTrey Hilburn III Septemba 13, 2021
by UTrey Hilburn III Septemba 13, 2021 475 imbono
Ividiyo yeTolo Ukukhusela ijongeka imnandi. Emva kokuvavanywa kwayo kwimiboniso bhanyabhanya embalwa, ifikile kwi-ray-ray kwaye asinakulinda ukuyikhangela. Ibali kukutshisa okucothayo okujikeleza kuhambo olugcwele udonga ukuya kwimfihlakalo eludongeni, uloyiko kunye nobugqwirha obunokwenzeka.
Ndiyayithanda ifilimu yohambo yendlela elungileyo kwaye ndiyayithanda ifilimu enomsebenzi wokulinganisa ibali elinzima lonke. Kule meko, ngaba udadewabo ka-Leo owahlukane noVirginia usasebenzisa iziyobisi okanye ngaba le nto ayithethayo ngenkolo kunye nenkokeli eyimfihlakalo iyinyani? Ngaba yinto egqithisileyo kumava eVirginia okanye yinto embi ngakumbi?
Iqhotyoshelweyo elingezantsi lihlola ubudlelwane phakathi komntakwabo kunye nodade ohlukanisiweyo kunye nobudlelwane obukrakra, obunomtsalane aba bantu babini banalo omnye komnye.
Isishwankathelo se Ukukhusela ihamba ngolu hlobo:
“Xa umnxeba uvela oluhlaza okwesibhakabhaka ubuyisela uLeo (Joey Millin) kudade wabo, eVirginia (Madison West), ekude nosapho ngenxa yeminyaka yokusebenzisa iziyobisi, ufika emfumana yedwa Iflethi okanye indlu ekwicomplex Emva kokudlikizela kunye nokucaphuka, uVirginia wanyanzelisa kuLeo ukuba ucocekile iinyanga ezisi-8 ngenxa yokuncedwa liqela eliyimfihlakalo. Uzityand 'igila kumzalwana wakhe ongaqinisekanga ukuba ubukhulu bakhe kunye neparanoia zivela kwisithethe esibi esenziwe liqela elamngenisa kwelona lisezantsi kwaye ekugqibeleni bazibonakalisa njengehlelo. Esi siqalekiso sabopha iimvakalelo kunye neemvakalelo zomzimba kwindoda angazange adibane nayo ngaphambili. Ngomtshato wakhe ematyeni, uLeo uneedemon zakhe ajongane nazo. Nangona kunjalo, uthandabuza ngokungathandabuzekiyo eVirginia ukuba aqalise uhambo olunqamlezayo lokulandela umkhondo welinye ilizwe elisithunzela phantsi komqolomba ukuba ukuba akafumaneki ndawo kwaye konke kusentloko yakhe, uya kubuyela kwimeko yesiqhelo. Nangona kunjalo, njengokuba umhla wabo wekamva usondela, uLeo uqala ukukrokrela ukuba ibali likadadewabo lisenokuba linento ethile. ”
Iimpawu zeblu-ray zezi zilandelayo:
Inkcazo ephezulu (1080p) intetho ye-Blu-ray
Yoqobo 5.1 DTS-HD Master Audio
Izihlokwana ezikhethiweyo zesiNgesi kubantu abangevayo nabangeva kakuhle
Amagqabantshintshi erekhodi entsha kunye nabalawuli uPowell Robinson noPatrick R. Young, umlimi uLauren Bates kunye nabadlali abakhokelayo uJoey Millin kunye neMadison West
Amagqabantshintshi erekhodi entsha kunye nabalawuli uPowell Robinson noPatrick R Young, kunye nomhleli uWilliam Ford-Conway
Ukuwela i-Threshold, uxwebhu olubonisa ubude bokwenza i-Threshold
Ukuphakamisa imifanekiso ye-iPhone: Ukonakala koLungiso lombala
Into evela kwinto engekhoyo: Indie Genre Director Roundtable moderated by Scott Weinberg with director Powell Robinson & Patrick R Young (Threshold), Brandon Espy (We Follow You), James Byrkit (Coherence), Zach Donohue (The Den) no Elle Callahan (Witch Hunt )
Amandla e-Indie Horror -Ubambelele kwingxoxo engahambelaniyo nefilimu emodareyithwa nguZena Dixon kunye nabadlali uMadison West noJoey Millin (Threshold), uKelsey Griswold (Ulandelwe), uGabrielle Walsh noRyan Shoos
Izandi zeThreshold yoqobo yengoma yesandi
Isikripthi santlandlolo se-Threshold
I-trailer kunye ne-teaser yoqobo
Umkhono oguqulwayo onemifanekiso yoqobo kunye nesandula ukuthunyelwa yiKofi kunye neCigarettes
UKUQALA UKUCINGA KUPHELA: Incwadana yomfanekiso oqokelelweyo enombhalo omtsha kwifilimu ngu-Anton Bitel
Ungayithatha ikopi yakho Ukukhusela apha.